ရွေးကောက်ပွဲအပြီး မျှော်လင့်ချက်များနဲ့ မြန်မာပြည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ရွေးကောက်ပွဲအပြီး မျှော်လင့်ချက်များနဲ့ မြန်မာပြည်
ရွေးကောက်ပွဲအပြီး မျှော်လင့်ချက်များနဲ့ မြန်မာပြည်
Posted by piti on Dec 4, 2010 in News | 1 comment
ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ ရလာဒ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့အများ မျှော်လင့်ထားသလိုပါပဲ။ ဘာပဲပြောပြောပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ ရလာဒ်ကို ပြောင်းလဲလို့မရတော့ လက်ခံရမှာပါ။ အရင်ကထက်ပိုပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးခေါ်နို
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အပြည့်အ၀ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲကြီးကတော့ ကျင်းပပြီးစီးသွားခဲ့တာ တစ်လလောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ ရလာဒ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့အများ မျှော်လင့်ထားသလိုပါပဲ။ ဘာပဲပြောပြောပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ ရလာဒ်ကို ပြောင်းလဲလို့မရတော့ လက်ခံရမှာပါ။ အရင်ကထက်ပိုပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးခေါ်နိုင်ကြလိမ့်မယ်.. ရေးသားနိုင်ကြလိမ့်မယ်..ပြောဆိုနိုင် ကြလိမ့်မယ်… လုပ်ကိုင်ခွင့်ရကြမယ်လို့မျှော်လင့်ရတာပေါ့နော်။ နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲအပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်း (နိုဝင်ဘာ ၁၃) ရက်နေ့က ပြည်သူ့အချစ်တော် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာသတင်းကို ဂျာနယ်တွေမှာ ဝေေ၀ဆာဆာ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့တကွ ဖော်ပြလာခဲ့ကြတာတွေ့ရတော့ သတင်းဂျာနယ်တွေရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ကျွန်တော်တို့ရရှိပြီလို့ ထင်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဂျာနယ်အချို့ အရေးယူခံရတာကိုတွေ့ရတော့………. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိစေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ အခြားဆက်နွယ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲကို အတော်စိတ်ပူပန်ခဲ့ကြရပါတယ်။ မတော်လို့ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေရဲ့ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကို မပေးခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ အိပ်မပျော်သောညများကို စိုးတထိတ်ထိတ်နဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလအတွင်း FIT အချို့အတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာထုတ်မပေးခဲ့ပေမယ့် ခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေအစီအစဉ်နဲ့ ၀င်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေကို ဗီဇာထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် နိုဝင်ဘာလထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားဦးရေဟာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးသူတွေကို စိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ အိပ်မက်လှလှတွေမက်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်အဲဝေး ကို သက်တမ်းတိုးခွင့်မပေးတော့တဲ့အတွက် လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခု ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါတော့တယ်။ ရန်ကုန်အဲဝေး နဲ့ ခရီးစဉ်ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားကမ္ဘာလှည့်များအတွက် အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်တော့ တာပေါ့။ တခြားလေကြောင်းလိုင်းတွေနဲ့ ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ပေးပေမယ့် မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့ ခရီးစဉ်တွေ ဖျက်သိမ်းပြစ်ရပါတော့တယ်။ ဒီအတွက် ဟိုတယ်တွေ၊ ခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေ ပြာယာခတ်သွားပါတော့တယ်။ ရန်ကုန်အဲဝေး ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့သတင်းတွေအရ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးနဲ့ ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း တစ်ခုတို့ပူးပေါင်းပြေးဆွဲနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်တာဟာ မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်း မဟုတ်ဘူးလို့အမြဲပြောနေတဲ့သူတွေဟာ ရန်ကုန်အဲဝေးကို လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမပေးတာဟာ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းလို့ ယူဆနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ ဥာဏ်မမှီလို့မပြောတတ်ပါဘူး။ ဒီကိစ္စဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံကို လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်မယ့် နိုင်ငံခြားက လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် အလွန်ကောင်းတဲ့ နမူနာတစ်ခုဆိုတာ သူတို့တွေ သတိမထားမိတာလား၊ လစ်လျူရှုတာလားတော့ မသိပါဘူး။ အလုပ်လုပ်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုလုပ်တာဟာ အခုမှတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါတို့ပေးချင်ရင်ပေးမယ်၊ ငါတို့ပိတ်ချင်ရင် ပိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံခြားသားလုပ်ငန်းရှင်တွေကို အမေရိကန်က ဖိအားပေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်ခွင့်မလုပ်ဖို့ ပိတ်ဆို့တာနဲ့မခြားဘူးဆိုတာကို သတိထားမိစေချင်ပါတယ်။ အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေဟာ လျှပ်စစ်မီးအခက်အခဲကြောင့် လုပ်ငန်းအများစုရပ်နားခဲ့ကြတာကို အမေရိကန်နဲ့ အပေါင်းအပါတွေကြောင့်လို့ အပြစ်ပုံချနေတာဟာ မှန်ပါရဲ့လားလို့ ကျွန်တော့်ဥာဏ်လေး တစ်ထွာတစ်မိုက်နဲ့ စဉ်းစားကြည့်မိပါတယ် ……… ကျွန်တော် နောက်တစ်ခုလောက်ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ၀မ်းတွင်းမြို့နယ်ထဲက ရွာကလေးတွေကို ရောက်ခဲ့တုန်းက ရွာကလူတွေဟာ မြန်မာ့အသံနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားမှာကြားရတဲ့သတင်းတွေ၊ သတင်းစာတွေမှာ ဖတ်ရတဲ့ အကြောင်းတွေဟာ အမှန်တွေချည်းပဲ၊ BBC, VOA, RFA စတဲ့ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာနတွေကသတင်းတွေဟာ လုပ်ကြံထားတဲ့ သတင်းအမှားတွေလို့ ရိုးသားစွာနဲ့ထင်မြင်နေကြပါတယ်။ မြို့မှာကျောင်းတက်နေတဲ့၊ အလုပ်သွားလုပ်တဲ့သူတွေ ပြောတဲ့ BBC, VOA, RFA ကသတင်းတွေကို မယုံတဲ့အပြင် သူတို့ကိုပါ အပြစ်ပြောနေတာ ကြားခဲ့၊ မြင်ခဲ့၊ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရွာမှာ အမြင်ကျယ်သူတစ်ဦးကတော့ BBC, VOA ကို အမြဲနားထောင်နေပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဆိုရင် သူကအကျယ်ကြီးဖွင့်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေက သူ့ကို အမြင်မကြည်ပါဘူး။ သူတို့နဲ့စကားပြောတော့ ကျွန်တော့်ကိုတောင် အပြစ်တင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် သူတို့နဲ့အတိုက်အခံမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၆) နှစ် (၇) နှစ်လောက်ကဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ၀မ်းတွင်းမှာရေကြီးခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို သူတို့ကိုမေးကြည့်ပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ ရွာကတော့ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ ရေလွှမ်းမိုးကနေ ကပ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ တော်သေးတာပေါ့ လူအသေအပျောက်သိပ်မရှိဘူးနော်လို့ ပြောတော့ သူတို့က လူအများကြီးသေတဲ့အကြောင်း၊ တော်တော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အကြောင်း ၀ိုင်းပြောကြတော့တာပေါ့။ ဒီတော့ ကျွန်တော်က ခင်ဗျားတို့မဟုတ်တာမပြောနဲ့။ ကျွန်တော် မြန်မာ့အသံကသတင်းနဲ့ သတင်းစာတွေအမြဲဖတ်တယ်၊ လူအများကြီးသေတယ်လို့ (သတင်းတွေမှာလူသေတယ်လို့တောင်မပြောခဲ့ဘူးထင်ပါတယ်) မကြားဘူး၊ မဖတ်ခဲ့ရဘူးလို့ပြောတော့ သူတို့တွေက ကိုယ်တွေ့ဗျ။ အများကြီးသေတယ်တဲ့။ အဲဒါနဲ့ စကားကောင်းလိုက်တာ သူတို့ပြောတဲ့နောက်တစ်ခုပေါ့။ နွေရာသီဖြစ်လို့ သူတို့ဒေသအခြေအနေအရ နွေစပါးကို သိပ်မစိုက်ချင်ကြပါဘူး။ ငရုတ်နဲ့ တွဲစိုက်ချင်ကြပါတယ်။ လယ် (၈) ဧက ပိုင်တဲ့သူက (၅) ဧကစပါးစိုက်ပြီး (၃) ဧကလောက် ငရုတ်စိုက်ကြပါတယ်။ အဲဒါကို မြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေက ဆည်ရေသောက်ဒေသဖြစ်လို့ စီမံကိန်းဝင်သီးနှံဖြစ်တဲ့ စပါးကိုပဲအပြည့်အ၀စိုက်ခိုင်းနေပါတယ်။ သီးတော့မယ့် ငရုတ်ခင်းတွေကို အတင်းဖျက်သိမ်းခိုင်းပြီး စပါးစိုက်ခိုင်းနေပါတယ်တဲ့။ ငရုတ်စိုက်ခင်း မဖျက်သေးတဲ့သူတွေကို မြို့နယ်မှာခေါ်ပြီး မနက်ကနေ ညနေထိ အခန်းထဲမှာစုထည့်ပြီး ထားပါတယ်တဲ့။ ဖျက်သိမ်းမယ်လက်မှတ်မထိုးရင် မလွတ်ဘူးလို့ပြောတယ်လို့ သူတို့တွေကရင်ဖွင့်နေကြပါတယ်။ နွေစပါးဆိုတာ သူတို့ဒေသမှာစိုက်ရင် အရှုံးပေါ်တာ များပါတယ်။ ငရုတ်စိုက်ချင်တယ်၊ စိုက်တယ်ဆိုတာ အရှုံးထေမိအောင်လို့ပါ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က သူတို့ရှေ့မှာရှိတဲ့ သတင်းစာကိုယူပြီး ခင်ဗျားတို့မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေပြောမနေနဲ့။ ဒီမှာတွေ့လား။ တောင်သူတွေ ကိုယ်စိုက်ချင်ရာကို လွတ်လပ်စွာ စိုက်ပျိုးပိုင်ခွင့် အစိုးရကပေးထားပါတယ်ဗျာလို့ပြောတော့ သူတို့တွေ ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဘူး ဖြစ်ကုန်ရော။ ကျွန်တော်ကပြောပြလိုက်ပါတယ်။ အခု ကိုယ်တွေ့နှစ်ခုကို သတိထားမိလား။ ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တွေ့နဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်မှု တူညီရဲ့လားဆိုတော့ အင်း… အဲ… နဲ့ပေါ့။ BBC, VOA မှာပါတဲ့သတင်းတွေကို ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကို နားထောင်ပေးရင် မမှားပါဘူး။ ပဲဈေး၊ နှမ်းဈေး ကျမလား တတ်မလားသိရင် ကိုယ့်အတွက် အကျိုးမယုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေးတော့ နားမထောင်ချင်ရင်နေပေါ့လို့ ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ BBC, VOA ပုံမှန်နားထောင်တဲ့သူက ပဲဈေးနှမ်းဈေး အမြဲနားထောင်တော့ အရောင်းအ၀ယ်မမှားလို့ ရွာမှာ စီးပွားပိုဖြစ်နေပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေလည်း ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမယ့် သတင်းတွေကို နားထောင်လိုက်နာပေါ့လို့ သဘောရိုးနဲ့ရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ငါန်းဇွန်မြို့နယ်ထဲက ရွာအချို့ကို ရောက်ခဲ့တုန်းကလည်း ရွာသားတွေရဲ့ သနားစဖွယ်ဒုက္ခကို မြင်ခဲ့၊ ကြားခဲ့ရပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်တုန်းက နေပြည်တော်မှာ အရာရှိပေါက်စဖြစ်နေတဲ့ အဲဒီရွာသားတစ်ယောက် ရောက်နေပါတယ်။ သူ့ကို အမေကြီးအချို့နဲ့ ဦးကြီးအချို့က ရင်ထဲကခံစားချက်ကို စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးကိုပြောပြပေးဖို့ အကူအညီတောင်းနေတာပါ။ နွေရာသီမှာ နွေစပါးကို ဧရာဝတီမြစ်ရေတင် စီမံကိန်းကြောင့် မစိုက်မနေရ စိုက်ခိုင်းလို့ အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းပါ။ ယာမြေဟာ ရေရတိုင်း စပါးစိုက်လို့မှ မရတာ။ အဲဒါ နွေစပါးကို မစိုက်မနေရစိုက်ခိုင်းနေတဲ့အတွက် မိုးစပါးကရတဲ့ငွေကြေးအပြင် အရင်ကစုမိ ဆောင်းမိတဲ့ ငွေကြေးတွေပါကုန်လာနေပါပြီတဲ့။ တစ်ထက်စီလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အခြားသီးနှံလေးတွေ စိုက်ခွင့်ပေးဖို့ ပြောပေးပါတဲ့။ ပြောနေတဲ့သူတွေရဲ့ မျက်လုံးအိမ်မှာ ခံစားချက်ကြောင့် မျက်ရေဥလေးတွေ ဝေသီနေပါတယ်။ စပါးလုံးဝ မစိုက်ဘူးလို့မပြောကြပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒီရွာက စီးပွားရေးအဆင်ပြေတဲ့သူတွေဟာ နွေစပါးဒဏ်ကြောင့် ရွာကိုပြစ်ပြီး မြို့ကိုပြောင်းကုန်ကြပါပြီ။ အဲဒီဒေသကလူတွေက ခြင်္သေ့ကိုပဲ မဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုမဲပေးခဲ့တဲ့.. ယုံကြည်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ရိုးသားတဲ့သူတွေ စိုက်ပျိုးချင်တဲ့၊ စိုက်ပျိုးသင့်တဲ့ သီးနှံ လွတ်လပ်စွာစိုက်ခွင့်ရစေချင်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ ……….. ကျွန်တော်တို့တစ်တွေဟာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား ပြည်သူပြည်သားစစ်စစ်တွေပါ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို ကျွန်တော်တို့ နှစ်နှစ်ကာကာချစ်မြတ်နိုး တန်ဘိုးထားပါတယ်။ ဒီလိုပဲ အားလုံးကချစ်မယ်။ မြတ်နိုးမယ်။ တိုးတတ်စေချင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်…………ရွေးကောက်ပွဲအပြီး မျှော်လင့်ချက်များနဲ့ မြန်မာပြည် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အပြည့်အ၀ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲကြီးကတော့ ကျင်းပပြီးစီးသွားခဲ့တာ တစ်လလောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ ရလာဒ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့အများ မျှော်လင့်ထားသလိုပါပဲ။ ဘာပဲပြောပြောပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ ရလာဒ်ကို ပြောင်းလဲလို့မရတော့ လက်ခံရမှာပါ။ အရင်ကထက်ပိုပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးခေါ်နိုင်ကြလိမ့်မယ်.. ရေးသားနိုင်ကြလိမ့်မယ်..ပြောဆိုနိုင် ကြလိမ့်မယ်… လုပ်ကိုင်ခွင့်ရကြမယ်လို့မျှော်လင့်ရတာပေါ့နော်။ နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲအပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်း (နိုဝင်ဘာ ၁၃) ရက်နေ့က ပြည်သူ့အချစ်တော် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာသတင်းကို ဂျာနယ်တွေမှာ ဝေေ၀ဆာဆာ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့တကွ ဖော်ပြလာခဲ့ကြတာတွေ့ရတော့ သတင်းဂျာနယ်တွေရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ကျွန်တော်တို့ရရှိပြီလို့ ထင်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဂျာနယ်အချို့ အရေးယူခံရတာကိုတွေ့ရတော့………. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိစေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ အခြားဆက်နွယ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲကို အတော်စိတ်ပူပန်ခဲ့ကြရပါတယ်။ မတော်လို့ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေရဲ့ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကို မပေးခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ အိပ်မပျော်သောညများကို စိုးတထိတ်ထိတ်နဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလအတွင်း FIT အချို့အတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာထုတ်မပေးခဲ့ပေမယ့် ခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေအစီအစဉ်နဲ့ ၀င်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေကို ဗီဇာထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် နိုဝင်ဘာလထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားဦးရေဟာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးသူတွေကို စိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ အိပ်မက်လှလှတွေမက်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်အဲဝေး ကို သက်တမ်းတိုးခွင့်မပေးတော့တဲ့အတွက် လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခု ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါတော့တယ်။ ရန်ကုန်အဲဝေး နဲ့ ခရီးစဉ်ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားကမ္ဘာလှည့်များအတွက် အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်တော့ တာပေါ့။ တခြားလေကြောင်းလိုင်းတွေနဲ့ ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ပေးပေမယ့် မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့ ခရီးစဉ်တွေ ဖျက်သိမ်းပြစ်ရပါတော့တယ်။ ဒီအတွက် ဟိုတယ်တွေ၊ ခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေ ပြာယာခတ်သွားပါတော့တယ်။ ရန်ကုန်အဲဝေး ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့သတင်းတွေအရ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးနဲ့ ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း တစ်ခုတို့ပူးပေါင်းပြေးဆွဲနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်တာဟာ မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်း မဟုတ်ဘူးလို့အမြဲပြောနေတဲ့သူတွေဟာ ရန်ကုန်အဲဝေးကို လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမပေးတာဟာ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းလို့ ယူဆနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ ဥာဏ်မမှီလို့မပြောတတ်ပါဘူး။ ဒီကိစ္စဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံကို လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်မယ့် နိုင်ငံခြားက လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် အလွန်ကောင်းတဲ့ နမူနာတစ်ခုဆိုတာ သူတို့တွေ သတိမထားမိတာလား၊ လစ်လျူရှုတာလားတော့ မသိပါဘူး။ အလုပ်လုပ်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုလုပ်တာဟာ အခုမှတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါတို့ပေးချင်ရင်ပေးမယ်၊ ငါတို့ပိတ်ချင်ရင် ပိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံခြားသားလုပ်ငန်းရှင်တွေကို အမေရိကန်က ဖိအားပေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်ခွင့်မလုပ်ဖို့ ပိတ်ဆို့တာနဲ့မခြားဘူးဆိုတာကို သတိထားမိစေချင်ပါတယ်။ အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေဟာ လျှပ်စစ်မီးအခက်အခဲကြောင့် လုပ်ငန်းအများစုရပ်နားခဲ့ကြတာကို အမေရိကန်နဲ့ အပေါင်းအပါတွေကြောင့်လို့ အပြစ်ပုံချနေတာဟာ မှန်ပါရဲ့လားလို့ ကျွန်တော့်ဥာဏ်လေး တစ်ထွာတစ်မိုက်နဲ့ စဉ်းစားကြည့်မိပါတယ် ……… ကျွန်တော် နောက်တစ်ခုလောက်ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ၀မ်းတွင်းမြို့နယ်ထဲက ရွာကလေးတွေကို ရောက်ခဲ့တုန်းက ရွာကလူတွေဟာ မြန်မာ့အသံနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားမှာကြားရတဲ့သတင်းတွေ၊ သတင်းစာတွေမှာ ဖတ်ရတဲ့ အကြောင်းတွေဟာ အမှန်တွေချည်းပဲ၊ BBC, VOA, RFA စတဲ့ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာနတွေကသတင်းတွေဟာ လုပ်ကြံထားတဲ့ သတင်းအမှားတွေလို့ ရိုးသားစွာနဲ့ထင်မြင်နေကြပါတယ်။ မြို့မှာကျောင်းတက်နေတဲ့၊ အလုပ်သွားလုပ်တဲ့သူတွေ ပြောတဲ့ BBC, VOA, RFA ကသတင်းတွေကို မယုံတဲ့အပြင် သူတို့ကိုပါ အပြစ်ပြောနေတာ ကြားခဲ့၊ မြင်ခဲ့၊ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရွာမှာ အမြင်ကျယ်သူတစ်ဦးကတော့ BBC, VOA ကို အမြဲနားထောင်နေပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဆိုရင် သူကအကျယ်ကြီးဖွင့်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေက သူ့ကို အမြင်မကြည်ပါဘူး။ သူတို့နဲ့စကားပြောတော့ ကျွန်တော့်ကိုတောင် အပြစ်တင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် သူတို့နဲ့အတိုက်အခံမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၆) နှစ် (၇) နှစ်လောက်ကဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ၀မ်းတွင်းမှာရေကြီးခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို သူတို့ကိုမေးကြည့်ပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ ရွာကတော့ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ ရေလွှမ်းမိုးကနေ ကပ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ တော်သေးတာပေါ့ လူအသေအပျောက်သိပ်မရှိဘူးနော်လို့ ပြောတော့ သူတို့က လူအများကြီးသေတဲ့အကြောင်း၊ တော်တော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အကြောင်း ၀ိုင်းပြောကြတော့တာပေါ့။ ဒီတော့ ကျွန်တော်က ခင်ဗျားတို့မဟုတ်တာမပြောနဲ့။ ကျွန်တော် မြန်မာ့အသံကသတင်းနဲ့ သတင်းစာတွေအမြဲဖတ်တယ်၊ လူအများကြီးသေတယ်လို့ (သတင်းတွေမှာလူသေတယ်လို့တောင်မပြောခဲ့ဘူးထင်ပါတယ်) မကြားဘူး၊ မဖတ်ခဲ့ရဘူးလို့ပြောတော့ သူတို့တွေက ကိုယ်တွေ့ဗျ။ အများကြီးသေတယ်တဲ့။ အဲဒါနဲ့ စကားကောင်းလိုက်တာ သူတို့ပြောတဲ့နောက်တစ်ခုပေါ့။ နွေရာသီဖြစ်လို့ သူတို့ဒေသအခြေအနေအရ နွေစပါးကို သိပ်မစိုက်ချင်ကြပါဘူး။ ငရုတ်နဲ့ တွဲစိုက်ချင်ကြပါတယ်။ လယ် (၈) ဧက ပိုင်တဲ့သူက (၅) ဧကစပါးစိုက်ပြီး (၃) ဧကလောက် ငရုတ်စိုက်ကြပါတယ်။ အဲဒါကို မြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေက ဆည်ရေသောက်ဒေသဖြစ်လို့ စီမံကိန်းဝင်သီးနှံဖြစ်တဲ့ စပါးကိုပဲအပြည့်အ၀စိုက်ခိုင်းနေပါတယ်။ သီးတော့မယ့် ငရုတ်ခင်းတွေကို အတင်းဖျက်သိမ်းခိုင်းပြီး စပါးစိုက်ခိုင်းနေပါတယ်တဲ့။ ငရုတ်စိုက်ခင်း မဖျက်သေးတဲ့သူတွေကို မြို့နယ်မှာခေါ်ပြီး မနက်ကနေ ညနေထိ အခန်းထဲမှာစုထည့်ပြီး ထားပါတယ်တဲ့။ ဖျက်သိမ်းမယ်လက်မှတ်မထိုးရင် မလွတ်ဘူးလို့ပြောတယ်လို့ သူတို့တွေကရင်ဖွင့်နေကြပါတယ်။ နွေစပါးဆိုတာ သူတို့ဒေသမှာစိုက်ရင် အရှုံးပေါ်တာ များပါတယ်။ ငရုတ်စိုက်ချင်တယ်၊ စိုက်တယ်ဆိုတာ အရှုံးထေမိအောင်လို့ပါ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က သူတို့ရှေ့မှာရှိတဲ့ သတင်းစာကိုယူပြီး ခင်ဗျားတို့မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေပြောမနေနဲ့၊ ဒီမှာတွေ့လား၊ တောင်သူတွေ ကိုယ်စိုက်ချင်ရာကို လွတ်လပ်စွာ စိုက်ပျိုးပိုင်ခွင့် အစိုးရကပေးထားပါတယ်ဗျာလို့ပြောတော့ သူတို့တွေ ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဘူး ဖြစ်ကုန်ရော။ ကျွန်တော်ကပြောပြလိုက်ပါတယ်။ အခု ကိုယ်တွေ့နှစ်ခုကို သတိထားမိလား။ ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တွေ့နဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်မှု တူညီရဲ့လားဆိုတော့ အင်း… အဲ… နဲ့ပေါ့။ BBC, VOA မှာပါတဲ့သတင်းတွေကို ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကို နားထောင်ပေးရင် မမှားပါဘူး။ ပဲဈေး၊ နှမ်းဈေး ကျမလား တတ်မလားသိရင် ကိုယ့်အတွက် အကျိုးမယုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေးတော့ နားမထောင်ချင်ရင်နေပေါ့လို့ ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ BBC, VOA ပုံမှန်နားထောင်တဲ့သူက ပဲဈေးနှမ်းဈေး အမြဲနားထောင်တော့ အရောင်းအ၀ယ်မမှားလို့ ရွာမှာ စီးပွားပိုဖြစ်နေပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေလည်း ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမယ့် သတင်းတွေကို နားထောင်လိုက်နာပေါ့လို့ သဘောရိုးနဲ့ရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ငါန်းဇွန်မြို့နယ်ထဲက ရွာအချို့ကို ရောက်ခဲ့တုန်းကလည်း ရွာသားတွေရဲ့ သနားစဖွယ်ဒုက္ခကို မြင်ခဲ့၊ ကြားခဲ့ရပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်တုန်းက နေပြည်တော်မှာ အရာရှိပေါက်စဖြစ်နေတဲ့ အဲဒီရွာသားတစ်ယောက် ရောက်နေပါတယ်။ သူ့ကို အမေကြီးအချို့နဲ့ ဦးကြီးအချို့က ရင်ထဲကခံစားချက်ကို စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးကိုပြောပြပေးဖို့ အကူအညီတောင်းနေတာပါ။ နွေရာသီမှာ နွေစပါးကို ဧရာဝတီမြစ်ရေတင် စီမံကိန်းကြောင့် မစိုက်မနေရ စိုက်ခိုင်းလို့ အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းပါ။ ယာမြေဟာ ရေရတိုင်း စပါးစိုက်လို့မှ မရတာ။ အဲဒါ နွေစပါးကို မစိုက်မနေရစိုက်ခိုင်းနေတဲ့အတွက် မိုးစပါးကရတဲ့ငွေကြေးအပြင် အရင်ကစုမိ ဆောင်းမိတဲ့ ငွေကြေးတွေပါကုန်လာနေပါပြီတဲ့။ တစ်ထက်စီလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အခြားသီးနှံလေးတွေ စိုက်ခွင့်ပေးဖို့ ပြောပေးပါတဲ့။ ပြောနေတဲ့သူတွေရဲ့ မျက်လုံးအိမ်မှာ ခံစားချက်ကြောင့် မျက်ရေဥလေးတွေ ဝေသီနေပါတယ်။ စပါးလုံးဝ မစိုက်ဘူးလို့မပြောကြပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒီရွာက စီးပွားရေးအဆင်ပြေတဲ့သူတွေဟာ နွေစပါးဒဏ်ကြောင့် ရွာကိုပြစ်ပြီး မြို့ကိုပြောင်းကုန်ကြပါပြီ။ အဲဒီဒေသကလူတွေက ခြင်္သေ့ကိုပဲ မဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုမဲပေးခဲ့တဲ့.. ယုံကြည်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ရိုးသားတဲ့သူတွေ စိုက်ပျိုးချင်တဲ့၊ စိုက်ပျိုးသင့်တဲ့ သီးနှံ လွတ်လပ်စွာစိုက်ခွင့်ရစေချင်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ ……….. ကျွန်တော်တို့တစ်တွေဟာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား ပြည်သူပြည်သားစစ်စစ်တွေပါ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို ကျွန်တော်တို့ နှစ်နှစ်ကာကာချစ်မြတ်နိုး တန်ဘိုးထားပါတယ်။ ဒီလိုပဲ အားလုံးကချစ်မယ်။ မြတ်နိုးမယ်။ တိုးတတ်စေချင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်…………
ko piti has written 17 post in this Website..
I'm Myanmar. I love Myanmar. I live in Mandalay.
View all posts by piti →
စာတွေက..အပိုဒ်လိုက်ကို ထပ်နေတယ်ဗျ..။ တော်တော်ဖတ်ယူရတယ်..။
နောက် ၃လလောက်ဆို အစိုးရဖွဲ့ လောက်ပါပြီ။ အဲဒီမှာ .. ကံကောင်းရင်..ပညာတတ်တွေကို ၀န်ကြီးခန့်ပါမယ်တဲ့..။
ဆိုတော့ .. ပြည်ခိုင်ဖြိုးက…အင်အားအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတာမို့ ..သူတို့က အစိုးရဖွဲ့ မှာဖြစ်ပြီး..အဲဒီကရွေးပေးမဲ့… စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဟာ ..တောင်သူဦးကြီးတွေအကြောင်းနားလည်တဲ့ … ပညာတတ်ဖြစ်ပါစေ ဆုတောင်းကြပေါ့နော..။
နိုင်ငံရေးသဘောအရ… ပြောရရင်… ကိုယ်ကမဲပေးလိုက်တဲ့သူ အမတ်ဖြစ်ရင်..အဲဒီအမတ်ကို .. လွှတ်တော်ထဲ..အစိုးရအဖွဲ့ ကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံအတိုင်းဖိအားပေးဖို့… ထပ်ခါပြောရပါတယ်..။
သူတို့ကလည်း ..လူထုနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေရတာမို့ .. နောင်မဲရအောင်အတွက်ပါ ငှဲ့ ပြီး မဲဆန္ဒရှင်ကိုယ်စား လုပ်ပေးတတ်ပါတယ်..။